आउने साउन यति देखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ ? अवस्य पढ्नुहोस – Kavrepati
Home / समाचार / आउने साउन यति देखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ ? अवस्य पढ्नुहोस
आउने साउन यति देखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ ? अवस्य पढ्नुहोस
admin July 18, 2021	समाचार Leaveacomment 1,742 Views
काठमाडौ । काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले २०७८ को बैशाख १६ गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा असारको दोश्रो साताबाट स्माट्र निषेधाज्ञा हुँदै खुल्ने क्रममा छ। तर यो संगै संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै जान थालेको छ । यो अवस्थामा अब काठमाडौमा जारी रहेको निषेधाज्ञा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ ।
प्रजिअ निरौलाले भने, ‘कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा हुन सक्छ। हालसम्म प्रशासनले यस विषयमा छलफल गरेको छैन। हामी असारको ३०र३१ गते बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौं।’
आइतबार पनि काठमाडौं उपत्यकामा ३९१ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर १८३१ संक्रमित थपिँदा ३९१ जना उपत्यकामा थपिएका हुन्।
हिजो शनिबार उयत्यकामा ४१९ संक्रमित थपिएका थिए। आज उपत्यकामा थपिएका संक्रमितमध्ये काठमाडौं जिल्लामा २६३, भक्तपुरमा ३१ र ललितपुरमा ९७ छन्।
दैनिक नमुना परीक्षण गरिएकामध्ये करिब २२ प्रतिशतमा कोरोना पोजेटिभ देखिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जोखिम यथावत रहेकाले सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । संसदकाे आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक अपराह्न चार बजे बस्ने भएकाे छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते परमादेश जारी गरेको थियो ।
आइतबारकाे बैठकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही विधेयकहरुलाई प्रक्रियामा लगिने भएकाे छ । ओली नेतृत्वको सरकारले १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । तीमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेश पनि छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट संसदमा पेश गर्ने जानकारी यसअघि नै दिइसकेका छन् । यद्यपि आइतबारको पहिलो बैठकको कार्यसूची भने बिहान १० बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुंगो लगाउने छ । दुइ तिहाइ मत ल्याएर सत्तामा गएकाे नेकपा एमाले अाजदेखी प्रतिपक्षमा बस्ने भएकाे छ ।
Previous कस्तीबाट कस्ती भईन मेरी बास्सैकी चम्सुरी, हेर्नुस यस्तो अ’वस्था, श्रीमान किन आएनन ?
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, श्रावण ४ गते सोमबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल